Aigona here Apple marezenisi ayo anoshanda system? | Linux Vakapindwa muropa
Aigona here Apple marezenisi ayo anoshanda system?
Dzimwe nhepfenyuro uye mamwe makuhwa zvinoratidza izvozvo Apple inoita kunge iri kuzvidza zvimwe zvigadzirwa zvayo uye pamwe tarisa kune vamwe vakaita semafoni mbozhanhare izvo zvakaita kuti vabudirire, ndiko kuti, mafoni uye mapiritsi. Kunyangwe zvichiita sekunge gore rinouya tichaona zvimwe zvigadzirwa zvakavandudzwa senge iMac, Mac Pro uye Mac Mini, kwechinguvana izvozvi zvave kumashure kwekambani yeCupertino.
Ndosaka vamwe vachizvibvunza kuti bheji rako iOS uye zvigadzirwa zvako zvine simba, wadii kurega rezenisi macOS Izvo zvinobvumidza vamwe vazhinji vanogadzira michina yemakomputa, senge HP, ASUS, Dell, Acer, nezvimwe, vanogona kuunganidza makomputa vopa imwezve nzira kune angangove aripo mawindows. Ndokunge, kuve nekugona kuve ne desktop PC uye maLaptops ane macOS akaiswa. Mune mawonero angu, izvi hazvizove zvakadaro, zvirinani munguva pfupi.
Kufamba uku pamwe zvaizokuvadza Linux zvakanyanya, sezvo yaizove nemakwikwi matsva izvo izvozvi zvaisina nepfungwa yekuti haugone kuisa macOS pane chero isiri-Apple chishandiso, saka kungave iwe unotenga Apple chishandiso kana iwe unokanganwa nezve macOS. Uye ini ndinotaura musimboti nekuti iwe unotoziva kuti ichi hachisi chokwadi zvachose, pane akashandurwa mifananidzo yeApple system kuti ikwanise kuisa pane asiri Apple makomputa (ona Hackintosh).
Kunyangwe zvaizokanganisa Linux zvakanyanya kana zvishoma uye kuti vanozopedzisira vakuita here kana kwete, izvo zvandinodzokorora, handifunge kuti vachadaro, zvirinani mumakore mashoma kubva zvino. Ichokwadi kuti Apple iri kudurura zviwanikwa zvakawanda mukati iOS uye mukugadzira yayo A-Serial SoCs. Iwo maratidziro azvino emachipisi aya anouya kuve nemitambo yakanaka kwazvo yekushandisa yakaderera. Izvi zvakaita kuti vamwe vafunge kuti Apple inogona kumira kuvimba neIntel microprocessors sezvayaiita muzuva rayo ne Motorola uye IBM machipisi (kutyora inozivikanwa AIM)
Kunyange zvakadaro ... runyerekupe. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Aigona here Apple marezenisi ayo anoshanda system?
Enda enda !!!
hapana jee…. izvo hazvisi kuzoitika.
Pindura kuna Aeon
KuLinux? Chrome OS mune chero mamiriro. Uyo anoedza GNU / Linux, uye anoifarira, haichinje, isu tiri chete 2% pane desktop asi isu vedu vanoziva zvakanyanya, uye iyo nhamba handifunge inosvika manhamba maviri pakati peyakajairwa distros. (MS inogona kuchinja kernel yayo kubva kuNT kuenda kuLinux izvozvi zvave kuita platinum nhengo yenheyo, semazuva ayo Apple yakatamira kuFreeBSD ine kuvandudzika kukuru mumaOS ayo, asi yaisazove GNU, asi se Android kana Chrome OS "Chinhu" chinoshandisa kernel yeLinux, isiri diki)
Felix mongort akadaro
Mune mawonero angu, imwe chete nzira yeWindows ndeyeLinux. Kazhinji, iyo inosiya Windows haisi yekupinda mune imwe ecosystem iyo yakatovharwa kupfuura Windows, sezvazviri OS X. Kazhinji, mushandisi weMAC ndeimwe mhando yemushandisi akapatsanurwa. Imwe profil yakasiyana neWindows neLinux. Iye mushandisi ari musungwa zvakanyanya kune MAC ecosystem kupfuura vashandisi veWindows neLinux kune avo ecosystems.
Kupa marezenisi OS X kana chingave chiri chimisheni cheMAC mushandisi uyo anoda kumutsiridza iyo michina uye asingade kushandisa yakawanda zvisina maturo pane nyowani Hardware nekubhadhara yakawedzera kutakura chisimbiso cheapuro. Iyo inogona ichiri kubatanidzwa kune MAC ecosystem, asi isina kusungirwa pakutenga iyo Hardware kubva kune mumwe mugadziri.
Mukufunga kwangu, Apple yaizongotora chiyero ichi mune yekupererwa kesi apo gore rega rega yairasa zviuru zvevashandisi veMAC, zvichikonzera kusahadzika nezve kuvapo kwepuratifomu. Asi panguva ino, zvinoita kunge zvisiri izvo. Muchokwadi nemhando yavo nyowani yeMacbook ivo vari kutengesa kunge hotcake. Vateereri veMAC vanogadziriswa, pasina zvakanyanya kuwana kana kurasikirwa nevashandisi. Asi vane muganhu wakawanda nemitengo yavo yakakwidziridzwa zvekuti havasi kuzosiya bhizinesi. OS X ndiyo hokore, asi bhizinesi riri kutengesa iyo Hardware pamitengo ine hyper-inflated. Mukuenzanisa, kutengesa marezinesi zvaizoreva kutengesa kwakaderera kwehardware. Uye kunze kwemarezinesi akachengetedzwa. Ndokunge, kana uine rezinesi rekushandisa, iwe unotenga muchina mutsva, uye iwe unoisa iyo yekare system.
Pindura Felix Mongort
Mari inowaniswa neApple, ndinofunga, haisi kunyanya kubva pakutengesa zvishandiso zvavo, asi kubva mukutengesa muAppstore neTunes, mimhanzi yese inotengeswa pasirese, mitambo, mari kana matombo anokosha uye mashandisiro ese PaMacOS kana iOS, kana Apple haina rezinesi macOS yayo imhaka yedzidziso yayo yechinyakare, zvisinei kuti shanduko inovawedzera zvakapetwa kaviri, kunyangwe katatu kutengesa muchitoro chayo chepamhepo, kunyangwe paigona kuve nenjodzi; "Piracy" kana sevamwe vanoidaidza kuti "kugovana", teras dzinoverengeka, nenzira XD, sezvazvinoitika kuWindows, Android haidaro, nekuti inorarama kunze kwe spam XD.
WSL Distribution Switcher, chirongwa chinotibvumidza kuunza chero distro kuWindows 10
Zorin OS 12 yave kuwanikwa